သင်၏လူမီနီယမ်အပေါ်မြူအညစ်အကြေးများဖြေရှင်းနည်း iMac | ငါက Mac ကပါ
jaca101 | | Apple, iMac, Mac OS X ကို, NOTICIAS
Blogosphere နှင့်ဖိုရမ်များရှိဆိုဒ်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသော iMac ဖလှယ်ခြင်းအကြောင်းကိုအာမခံခြင်း၊ dehumidifiers များ ၀ ယ်ခြင်းနှင့် iMac မျက်မှန်များပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းပြwithနာကိုဖြေရှင်းရန်မျက်မမြင်ချောင်းများစွာကိုဖတ်ရှုခဲ့သည်။
iMac ၏ဖန်ခွက်ကိုသံလိုက်အားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်၎င်းကိုသာဆွဲရန်လိုအပ်သည်။ ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးဖိုချောင်ကြွေပြားများသို့မဟုတ်ကား GPS ပုခက်၏စုတ်ယူခြင်းခွက်မှစုတ်ပြဲရန်အသုံးပြုသောပုံမှန်စုတ်ယူခြင်းခွက်ကိုသုံးမည်။ စုတ်ယူခြင်းခွက်မဆိုအမျိုးအစားကိုပြုလိမ့်မည်။ (သင့်တွင်စုတ်ခလုတ်မရှိပါကဆဲလ်ပိုဖန်စက္ကူကို သုံး၍ လက်ကိုင်လက်ကိုင်ကိုအလယ်တွင်ထားပါ။ )
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်ခွက်ကိုမီးဖိုချောင်စုပ်၌ဆေးကြောကြသည် (အထည်နှင့်အတူအထည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ ၎င်းသည်အဆင်ပြေသော်လည်း၎င်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိပြီးဖြစ်သည်)
အမှန်မှာ၊ ပြproblemနာသည် iMac တွင်ရှိသောအားနည်းချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အဖြေမှာအလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်တော့ Apple နှင့်တိုက်ခိုက်ရန်မထိုက်တန်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » iMac » iMac လူမီနီယမ်အပေါ်မြူမှုန့်များမှဖြေရှင်းချက်
Alberto Rojas ဟုသူကပြောသည်
Macbook pro ရဲ့ဖန်သားပြင်ထဲကမှိုနဲ့မှိုတွေကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းနိုင်မလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်သူကငါ့ကိုဒီပြproblemနာအတွက်အဖြေပေးနိုင်သလဲ
Alberto Rojas အားပြန်ပြောပါ
ငါမသိဘူး၊ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကြည့်လိုက်တာ၊ ဒါကြောင့် hehehe လှည့်ကွက်ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားဖန်ခွက်ကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖုန်ဖွင့်နေချိန်မှာဖုန်မှုန့်တွေမ ၀ င်နိုင်ဘူး။ ဒီဟာ imac အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့တကယ်မသိပါဘူး။
@Jose ကြည့်ရအောင်၊ အရာသည်အံဆွဲဖြစ်သည်။ လှပသောဖန်သား၏နောက်ကွယ်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်တောက်ပသောမော်နီတာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ဖန်ခွက်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်ကြာဖယ်ရှားပစ်ခြင်းမှဖုန်မှုန့်ကိုဖမ်းမိပါကသင်နှင့်အတူမလာသည့်အခြားအရာများကဲ့သို့သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဖန်ခွက်
@Alberto Rojas အမှန်တရားကတော့ဖန်ခွက်ကို MacBook pro ကနေဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါကိုငါစမ်းသပ်စရာမရှိခဲ့ဘူး။ ငါသည်လည်းအာကာသဤမျှလောက်သာရှိသည့်သံလိုက်များနှင့်လည်းသွားသည်ဟုမထင်ပါ။ သို့သော်၎င်းတွင်အချို့သောချည်နှောင်ထားသောအရာများသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိနိုင်သည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်လာသည်ကိုကြည့်ရှုရန်စုတ်ယူခြင်းခွက်ဖြင့်ဆွဲထုတ်ခဲ့ဖူးပါသလား။
ဒါဟာသေချာပေါက်လွယ်ကူပြီးအနည်းငယ်စုတ်ယူခြင်းခွက်နှင့်အတူလွယ်ကူသည်။ ငါ့မှာအစိုဓာတ်ရှိတယ်။ ငါရှင်းပြပါရစေ၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အပေါ်ပိုင်းတွင်သဲလွန်စအနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေသေးသည်၊ ဖန်ခွက်အဖုံးတွင်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယခုချက်ချင်းဖျက်လိုက်သည်၊ သို့သော်အခြားသူများလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါကဒီဇိုင်းချို့ယွင်းချက်တစ်ခုလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး ... အကြံဥာဏ်များလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
@ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သာမကမော်နီတာ၏ကိုယ်ပိုင်တောက်ပနေသောဖုံးအုပ်မှုအောက်တွင်စိုထိုင်းမှုရှိသည်ဟုသင်ပြောပါက ??? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအပေါ်ဘက်မှာရှိရင်အခြားမော်နီတာလိုလိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်၊ အကယ်လို့သင်ဒီလိုမြှုပ်မျိုးနဲ့မော်နီတာတွေကိုသန့်ရှင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် ...
ကျွန်တော့် MacBook Pro ရဲ့မျက်နှာပြင်က ၁၇ is ။ ထိုအခါအခိုးအငွေ့နှင့်အစွန်းအထင်းအတွင်း၌သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမဟုတ်အထက်။ ငါကထည်ထဲကနေဖယ်ထုတ်သင့်ကြောင်းငါထင်။ မည်သူမဆိုစာမေးပွဲလုပ်ရန်ဝံ့သနည်း။
@Alberto Rojas ဒါပေမယ့် ... ၁၇ ယောက်လား။ Macbook pro? ၎င်းသည် Unibody မဟုတ်ပါ။ မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ဖန်သားပြင်မရှိပါ။ မျက်နှာပြင်တစ်ခုသာရှိပါသည်။ မကောင်းပါ။ သင်၏ပြsolutionနာသည် Apple ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
၎င်းသည် ၂.၃၃ GHz ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည် ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံတွေ၊ နေရာတကာမှာရှိနေတဲ့အနက်ရောင်အစက်တွေကိုထိတွေ့တဲ့အခါပြtheနာတွေကိုသင်မမြင်နိုင်ဘူး။ ထို့နောက် Apple ထံသို့။
အကယ်၍ သင့်တွင်အနက်ရောင်အစက်များရှိပါက၎င်းသည်သေနေသောပစ်ဇယ်များကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်၊ Apple ကိုယခုဖြစ်သည်။
ထူးဆန်းလိုက်တာ။ Apple အတွက်!
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ မျက်နှာပြင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ရေရှည်အဖြေဖြစ်သည်၊ သို့သော်မျက်နှာပြင်ကိုဖယ်ရှားရန်မလိုဘဲအခြားပိုမိုမြန်ဆန်သောဖြေရှင်းချက်လည်းရှိသည်။ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုအသုံးပြုပြီး imac မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်လေပူပေးသည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းငွေ့ရည်ဖွဲ့လိမ့်မည်။ ပျောက်နေ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကုန်လွန်ပြီးစိုထိုင်းဆဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အစွန်းအထင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာပါ။
ဟားဟားဟား… .. မင်း Mac အသုံးပြုသူတွေ၊
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ဖန်ခွက်ကိုပန်းကန်ဆေးထဲထည့်ပြီး ultra calgonit မထည့်တာဘာကြောင့်လဲ။
လူသား၊ အမှန်တရားကတော့ဒီဟာကမေ့လို့မရနိုင်တဲ့အမှားပဲ။ ငါဝယ်လိုက်ပြီးယူရို ၁၇၀၀ ပေးပြီးဒီပြproblemsနာတွေရှိနေရင်ကောင်းကင်မှာအော်ဟစ်လိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါရှုံးနိမ့်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲ ၀ င်းဒိုးရှုံးနိမ့်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ၊ win vista ခံစားနေရပြီး၊ ငါ imac ဝယ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီပျက်ကွက်မှုနဲ့ဂရပ်ဖရီးမောင်းသူနဲ့ပေးနေပုံရသောနောက်တစ်ခု ၁၆၄၉ ယူရိုကနေစပြီးငါလိုချင်တဲ့မော်ဒယ်ကသူတို့ဟာနေ့တိုင်းမသုံးကြဘူးဆိုတာကိုသူတို့ဖြေရှင်းနိုင်မလားကြည့်ချင်တယ်။
သငျသညျ, ပန်းသီးအသုံးပြုသူများသည်, ပန်းသီးထုတ်ကုန်များထဲမှချွတ်ယွင်းသို့မဟုတ်လေးနက်ချို့တဲ့လျှင်သောအခါ, ဤနည်းအားဖြင့် Apple က၎င်း၏အသုံးပြုသူများကျေနပ်အောင်နှင့်လျော်ကြေးပေးရန်အများကြီးပိုဂရုစိုက်မယ်လို့သောအခါပိုမိုတိုင်ကြားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်လျှင်၎င်းတို့သည်လုပ်ရပ်အတိုင်းပြုမူပြီးလက်ဝဲဘက်မှကျေနပ်အားရမှုနှင့်ထုတ်ကုန်အတွက်တစ်ခါတစ်ရံ၌ပင်အားနည်းချက်များကို (အိုင်ဖုန်းတွင်) အဖြစ်သို့ပြောင်းသွားလျှင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဘက်ထရီအားဘက်မလိုက်ဘဲပုံမှန်လုပ်နေသည်။ ပြ%နာများကိုဖြေရှင်းရန် 200% ။
ငါဆိုသည်ကားအလွယ်တကူပြင်နိုင်သည်။ ငါ့မှာ Apple Care ရှိတယ်။ Apple ကငါ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအခမဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဖန်ခွက်ကိုပန်းကန်ဆေးစက်ထဲမှာ ultra calgonit နဲ့မထည့်ထားလို့ပါ။
Sakura, အနတ္တကိုရပ်တန့်, မှတ်ချက်များ၏စိတ်ကူးသူတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုကူညီ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ပြproblemနာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာပြီးပြည့်စုံသောအလျားလိုက်လိုင်းရှိပြီးမှောင်သောအရောင်ရှိသည်။ မြူနှင့်အတူတူပင်အရောင်ရှိသည်။ အောက်ခြေဘယ်ဘက်တွင်မျဉ်းကြောင်းသည် ၈ စင်တီမီတာရှိသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရောင်များနှင့်အတူမြင်စေခြင်းငှါ ... ။ တခါတရံ Mac သည်ရက်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားသောအခါပျောက်ကွယ်သွားသည်၊ ၎င်းကိုငါဖွင့်လိုက်သည်၊ ၎င်းသည်မရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်နာရီနှင့်အတူစတင်ပြသခြင်း ဖြစ်၍ makina ကိုမပိတ်ဘဲကြာချိန်သည်နည်းနည်းကြာလာသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါမှန်မှန်ကိုရှင်းလိုက်တယ်။ ကီလိုမီတာဟာနဂိုကတည်းက metrakilate ဖြစ်နေပုံရတယ်။ ငါကရွှေထက်ပိုတောက်ပတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာက tft ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာကိုငါမြင်တယ်။ နောက်ကွယ်မှာလူတွေအကြောင်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအများကြီးပြတယ်၊ ငါဟာဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါ့အပြင်ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ostiadဟာငါ makina ရဲ့စျေးနှုန်းကသိပ်မများပါဘူး။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Fonsi, lcd မော်နီတာတွေမှာသင်မြင်ရလိမ့်မယ်၊ တောက်ပမှုနဲ့အရောင်တွေကိုမတူညီတဲ့နည်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်တယ်၊ အရောင်တွေကို lcd ရဲ့ pixel တွေကဖန်တီးထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်တောက်ပမှုကိုနောက်ကွယ်မှာအလျားလိုက်မီးအိမ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ သငျသညျပန်းသီးကိုဆက်သွယ်သင့်ကြောင်းမီးခွက်များထဲမှ
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်၏ TFT ပျက်နေတယ်၊ ​​သင်အဲဒါကိုပြင်ရမယ်၊ ဒါကိုအာမခံထားရမယ်။
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာ iMac 24″ 2.8 ati radeon etc etc စသည်တို့ ...
များစွာသောလူလိုပဲ ... ငါ polycarbonate ပန်းကန်ထဲမှာပျော်ရွှင်အစွန်းအထင်းတယ် ...
Samsung မော်နီတာနှင့်စူပါ drive သည်လည်းကျွန်ုပ်ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ သို့သော်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
ktuin သို့ကျွန်ုပ်၏လေ့လာရေးခရီးစဉ်တွင်နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်းတွင်တူညီသောပန်းချီကားများနှင့်အတူတူညီသောပန်းချီကားများနှင့်အတူမြင့်မားသောအပူချိန်ရှိသော Renoir ... အသီးနှင့်တူသော iMac ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
အာမခံချက်မရှိတော့ပါ ... အစွန်းအထင်းများသည် ၂ ရက် ၃ ရက်သာကြာမြင့်ပါသည်။
ဒါကငါ့ကောင်၏အဖျားကိုဖယ်ဖို့ငါနောက်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တာ ... ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုတူးခဲ့တယ် ...
သူ့ဘဝကိုကယ်တင်ရန် ... အရာအားလုံး၏အစစ်အမှန်တရားခံဖြစ်သော ... အလွန်ပူပြင်းလွန်းသော ... အထူးကတ်ထူပြားတစ်လုံးဖြင့်ငါသီးသန့်ခွဲထုတ်ထားခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ကထိုအရင်းအမြစ်ကိုထည့်သွင်းရန်မစဉ်းစားဟုငါဆိုသည်။ Mac mini ??
ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်လှိမ့်နေပြီးနောက်ကွယ်မှလောင်ကျွမ်းနေသောအပူရှိန်ထွက်လာသည်။ အတွင်းရှိအပူရှိန်အားလုံးသည်ဤအမျိုးအစား၏မော်နီတာနှင့်အတူအလွန်အဖျက်အဆီးဆုံးဖြစ်သည် ...
တကယ်လို့အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါမသိသေးတဲ့အရာ .. ငါပြောမယ်။
ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ကောင်းရှိသော်လည်းသင့်အပေါ်သို့ရောက်သောအခါသင်သည်၎င်းတို့ကိုမှန်ကန်စွာရရန်သင်ကြားမှုကို ဗဟိုပြု၍ နည်းနည်းချင်းညှိနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ချော်ပါက ... သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကမျက်နှာပြင်သည်စွန်းထင်းခြင်းမရှိသေးပါ။ ၎င်းသည်အေးမြသောအလုပ်လည်းရှိပြီး၊ အရင်းအမြစ်မှအပူထွက်ပေါ်လာပါသည်။
တွင်းတူးရန်အပေါက်များကိုကြိုတင်မှတ်ထားခြင်းသည်ကောင်းသောတူးဖော်ခြင်းဖြစ်ပြီးသင်စတင်တူးဖော်သည့်အခါ၎င်းသည်သွေဖည်ခြင်းမရှိချေ။ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုလည်းရှိသည်။ Fan Control အချို့သည်သင့်အား slot မှလေကိုပိုမိုထုတ်လွှတ်ရန်အတွက်မြန်ဆန်သောမြန်နှုန်းဖြင့်ကွန်ပျူတာ၏ပန်ကာများကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
အခုတော့ငါသိချင်စိတ်မှအရှုံးမပေးနှင့်ဆူညံသံကိုစမ်းသပ်ဖို့က installed ။ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၂၃ ဒီဂရီကျဆင်းသွားတယ်၊ ၇၃ ကနေ ၅၀ အထိကျသွားတယ်။ ပူတယ်ဆိုရင်ဂရုမစိုက်ဘူး၊ အသံမထွက်လာဘူး၊ ရေနွေးငွေ့လည်းမရဘူး။ အယ်လ်ဘမ်၏အလုပ်၏အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ ၆၈ ံဖြစ်ပြီးပန်ကာထိန်းချုပ်မှုမရှိပဲပိုကောင်းသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!! ငါခရစ်စမတ်အတွက်အိမ်အပြင်ဘက်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာအေးခဲလာပြီးပြန်လာတဲ့အခါ iMac ဖန်ခွက်ထဲမှာအထဲမှာရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေ၊ ဖိုရမ်တွေအများကြီးဖတ်ပြီးရင်ဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ post ကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။
ငါ Mac နဲ့အတူခဏတာနေခဲ့ပြီးပြီ။ သင်ဝေဖန်နိုင်သည်၊ ဤဘဝ၌ပြီးပြည့်စုံသောအရာမရှိပါ (ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထက်စာပိုစ့်ပိုများမည်မဟုတ်)) ။ ဒါပေမယ့် Apple ကအမှားတစ်ခုခုလုပ်မိရင်ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းနည်းအမြဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်။
María E. သို့ပြန်သွားရန်
ငါအကာအကွယ်တောက်ပတဲ့ဖန်ခွက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ၊ အတွင်းအပြင်အပြင်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတုန်းပဲ၊ ငါဟာအစွန်းအထင်းတွေရှိတုန်းပဲ။ ရေ၊ ခြောက်သွေ့မှုနှင့်ကင်မရာများနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုသေချာစွာပြုလုပ်ထားသည်။ ငါနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်လုံးဝဘာမျှမ။ သူများသည်အစက်အပြောက်မော်နီတာအတွင်း၌ရှိကြ၏။ ငါကအပူတပြင်းပြီးပြီ ....
Monitor ရဲ့အဖုံးကိုခွဲပြီးသန့်ရှင်းရမယ်။ အပူချိန်လွန်ကဲစွာလေဝင်လေထွက်ခြင်းဖြင့်မော်နီတာ၏ထိပ်သို့တက်ပြီးစွန်းနေသည့် smc ပန်ကာထိန်းချုပ်မှုကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။
မယုံနိုင်စရာကောင်းသောကိရိယာများအတွက်အဖျားမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ဟေ့ငါ့မှာ ၁၅ လက်မ aluminium macbookpro ရှိတယ်။ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမကြာသေးခင်ကမှပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်အစက်လေးတွေအနည်းငယ်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့က "control bar" ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ (ဖိုင်၊ တည်းဖြတ်၊ ကြည့်၊ သမိုင်း၊ စသဖြင့်) ။ ) ။ ငါကရူးသွပ်တယ်၊ ငါကပိုတီထွင်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့ mac အပူလွန်ကဲပြီးဗွီဒီယို (သို့) အခြားလေးလံသောဖြစ်စဉ်များကိုပြသတဲ့အခါငါသေးသေးလေးကနေပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့စနစ်နဲ့ရေအောက်မှာအေးအောင်အဖြေရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ art fountain (၎င်းသည်ဖန်ခွက်မှရေကိုထုတ်ယူ။ ရှည်လျားသောရေပိုက်မှတဆင့်ဖန်ဆီသို့ပြန်ပို့သောသေးငယ်သည့်မော်တာငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရေနှင့်အအေးခံစက်၏အောက်တွင်လွင့်စင်သွားစေခဲ့သည်။ ။ ) control bar ပေါ်ရှိအလင်းအစက်အပြောက်များအပြင်အပြင်ဘက်တွင်သေးငယ်သည့်ခြစ်ရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ၎င်းသည် screen ၏ဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။ လည်းမကြာသေးမီကထင်ရှား။ ,
ဒီဒေတာအားလုံးအပြင်ကျွန်တော်ဟာကွန်ပျူတာကို ၈ နာရီတစ်တန်းနဲ့အထက်အသုံးပြုတယ်၊ ငါတစ်ညလုံးအလုပ်လုပ်ချင်တယ်၊ တခါတလေအဲဒါကိုအပူပေးပြီးစနစ် (osx) ရူးသွားပြီးရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုပေးတယ် နာရီပေါင်းများစွာအကြာတွင်၎င်းကိုပိတ်ပြီးနောက်တွင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်အကြိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ဟာသူပုံမှန်ဖြစ်သွားသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကျောင်းသားဖြစ်သည်။ ဤစက်သည်အရှိန်ပြင်းလာပါကကျွန်ုပ်သည်အခြားတစ်ခုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဝယ်နိုင်သည်ဟုမထင်ပါနှင့်။ ကူညီပါ!!!!!!!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းများ
ကျွန်တော့်မိန်းကလေးက ၁၅ လက်မ Macbookpro၊ ၁.၈၃GHz Intel Core Duo၊
2 GB 667 Mhz DDR2 SDRAM ရှိပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏ဒုတိယပိုင်ရှင်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဒုတိယ ၀ ယ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ဘက်ထရီကိုအလွန်စျေးပေါသောယေဘူယျအားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်၊ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကသင်၌ရှိခဲ့သည့် memory card ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အခြားမေးခွန်းတစ်ခု - သင်၏ macbooks တွေရဲ့အပူချိန်ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ။ ငါတိုင်းတာခြင်း၏ function ကိုဆောင်တတ်၏တဲ့ tester နှင့်အတူငါပြုနိုင်သလား? အကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကဘာလဲ? ငါ sensor ကိုထားရှိရာအပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန် tester ကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုလျှင်။ ကွန်ပျူတာ၏ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် tester sensor ကိုထားရသနည်း။ ကျွန်တော့်ရဲ့ macbook အပူပေးဆုံးအပိုင်းကတော့ဘက်ထရီနဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့အစွန်းကြားမှာရှိတယ်။
Model Name: MacBook Pro 15″
Processor အမည်: Intel Core Duo
ပရိုဆက်ဆာမြန်နှုန်း: 1.83 GHz
ပရိုဆက်ဆာအရေအတွက် - ၁
Core ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 2
L2 Cache ကို:2MB
ဘတ်စ်ကားမြန်နှုန်း: 667 MHz
Boot-ROM ကိုဗားရှင်း: MBP11.0055.B08
SMC ဗားရှင်း (system): 1.2f10
Serial နံပါတ် (system): W86110R0VJ0
"Pixel Fix" ဟုခေါ်သောအဖြူရောင်ကွက်လပ်များကိုပြုပြင်နိုင်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုမည်သူမဆိုကြားဖူးပါသလား။
အခြားဖိုရမ်တစ်ခုတွင်၎င်းတို့သည်အစက်အပြောက်များသည် Pixel Fix သော Transistor များ (သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာအားလုံး) ကိုထိန်းချုပ်မှုမှမရှိသောကြောင့် Pixel Fix က၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။
shit အကူအညီ !!!!!!!!! ကျနော့်တက္ကသိုလ်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ဟာဒီစက်အပေါ်မှာမှီတည်နေပြီးကျွန်တော်ပဲ bean ကိုလှိမ့်နေဖို့လိုတယ် (ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီမှာဒီမှာပြောနေတယ်) ။
ငါ့ကိုမယုံနဲ့၊ ငါရုပ်ရှင်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းပြောတဲ့အသံဗွီဒီယိုကိုလေ့လာနေတာ၊ ငါအခြေခံအားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တယ်, နှင့်မျက်နှာပြင်တက်လွဲချော်သွားလျှင် shit, ဒါကငါ့ကိုတကယ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
Stick Pixel ပါသည့် Plasma သို့မဟုတ် LCD Monitor ရှိပါသလား။
ဖန်သားပြင်ရဲ့ကျန်အစိတ်အပိုင်းတွေထက်အနည်းငယ်တောက်ပနေတယ် (သို့) အနည်းငယ်မှိုင်းနေပုံရတယ်။
ပထမ ဦး စွာသတိပြုသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် pixel များအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
Dead Pixel သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လုံးဝအနက်ရောင်ပုံပေါ်သည့်အရာဖြစ်ပြီးကျန်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ပါစေ၊ ဆိုလိုသည်မှာအရောင်မရှိဘဲသေနေသည်။
pixel တစ်ခုပိတ်ဆို့ခြင်းသည် transistor ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်သို့မဟုတ်အရည်ကြည်လင် (သို့) ပလာစမာကိုတစ်သားတည်းမဟုတ်သောဖြန့်ဖြူးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည်။
* ကွန်ပျူတာနှင့် Monitor ကိုပိတ်ပါ။ စိုစွတ်သောအ ၀ တ်များသို့မဟုတ်အထည်များကို သုံး၍ ပြproblemနာtoရိယာကိုအလယ်အလတ်ဖိအားပေးပါ။
အခြားကဏ္inများမှပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်၊ monitor ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုမနှိပ်မိရန်သေချာပါစေ။
* ထည်ကိုဖယ်ရှားပါနှင့်မှီဝဲ pixel ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
JScreenFix သို့မဟုတ် UDPixel ကဲ့သို့သောပြုပြင်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုသင်အောက်ပါလင့်ခ်များပေါ်တွင် နှိပ်၍ စမ်းကြည့်နိုင်သည်။
အခုဖော်ပြလိုက်တဲ့ method ဟာ stuck pixels တွေအတွက်အသုံး ၀ င်ပေမယ့် dead pixels အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာသတိပြုပါ။
ထို့အပြင်၎င်းသည် utility ၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်း၎င်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဖမ်းယူထားသော pixel များသည်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်မသွားလိုသည့်အချိန်များရှိသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
Calamaro: ဒီ MBP ကိုခွဲပြီးသူ့ရဲ့အပေါက်တွေကိုရှင်းပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ပူပြင်းလွန်းသဖြင့်၎င်းသည် OS X ကိုအရူးလုပ်ရန်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တွင်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများထဲမှတစ်ခုရှိပြီးလအနည်းငယ်ကြာသည့်အချိန်အထိအလုပ်လုပ်သည်။
Dead Pixels တွေအတွက်အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပေါ့ ... ငါကြိုးစားမယ်။ ၎င်း၏ယုတ္တိဗေဒရှိပါတယ်။
JACA101၊ မင်းတို့ပြောတာကသူတို့ဟာမီးခိုးမဟုတ်ဘဲရေငွေ့မဟုတ်ဘဲဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်တာလဲ။ ငါအမှုဖျက်သိမ်းရန်ရှိသည်ဆိုပါကအဘယ်သူမျှမပြproblemနာ။ ဒါပေမယ့်ငါကဒီတစ်ခုလုံးကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တာထက်ပိုပြီးမတတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ငါဆိုလိုတာကမော်နီတာအဘို့သကဲ့သို့နောက်တဖန်မရှိ။ ငါအခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်လိုလျှင်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကတောက်ပသောကာကွယ်မှုကိုဖယ်ရှားပြီးလျှင်, သင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ ???
နမူနာတစ်ခုအနေဖြင့်မည်သူမဆို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့်သူအတွက်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏မီးခိုးအညစ်အကြေးများကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကစဉ်းစားမိလျှင်၊
ကောင်းပြီ၊ ငါမပြင်သေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်မယ်။
jaca101 အရကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အစွန်းအထင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်လျှင်၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်သင့်သည်ဟုသင်ထင်သနည်း။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် glossy ကို Monitor ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး၎င်းတွင်အစက်အပြောက်များပါရှိပါက၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သန့်ရှင်းရေးလုပ်မည်နည်း။ ငါအလယ်မှာအပိုင်းပိုင်းပိုမရှိသောကြောင့်, ငါအဖြေတစ်ခုမမြင်ရပါဘူး, မော်နီတာတစ်ခုလုံးပေါက်ကွဲရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအနည်းဆုံးငါမြင်သောအရာကိုဖြစ်ပါတယ်။
မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏အစွန်းအထင်းများသည်တောက်တောက်အောက်ရောက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ဖျက်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုကိုတင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ တပ်ဆင်ခြင်းသည်လုံးဝမရနိုင်ပါက၎င်းအစွန်းရောက်မှုကိုချိုးဖောက်ရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ လည်ပတ်မှုပြီးရင်ငါ isopropyl alcohol (သို့) အခြား dielectric အရည်ထဲမှာဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်အစွန်းအထင်းများကိုသန့်ရှင်းစေမည့်မော်နီတာတစ်ခုလုံးကိုစုပ်ယူနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအလေးထားသည်။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ကောင်းကောင်းမရှင်းပြနိုင်တာ၊ ငါတင်သောကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်သည်တောက်ပနေသောဖယ်ရှားပုံကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ကောင်းပြီ, ငါအရာအားလုံးကို isopropyl အရက်သေစာနှင့်အတူသန့်ရှင်းရေးနှင့်လုံးဝမှာဘာမျှမ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစွန်းအထင်းအဲဒီမှာမဟုတ်ပေမယ့်မော်နီတာအတွင်းပိုင်း။ ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါဘယ်လောက်ပဲပေးဆပ်ပါစေသူအသုံးမကျဘူး။
ငါတွေ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာပထမကာကွယ်သူသို့မဟုတ်တောက်ပသောအရာများကိုဖယ်ရှားခြင်းအပြင်၊ မော်နီတာကိုလည်းဖြုတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောစကားလုံးများနှင့်တူသည်၊ Apple နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုမှအွန်လိုင်းဖွင့်သောဗွီဒီယိုတွင်ပင်လျှင် intuited အဆိုပါမော်နီတာပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်»။ ဒါဟာအစအန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မည်သူမဆို bricomania ၏စိတ်ကူးရှိပါသလား
သင်ကောင်းစွာရှင်းပြပြီးပြီဆိုရင်၊ ဟုတ်တယ် ... ငါ glosi မော်နီတာကိုယ်ထည်ကိုအတွင်းပိုင်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းသည်ပေါက်ကွဲ။ မရနိုင်ပါက၎င်းကိုဒက်ထရွိုက်ဖြေရှင်းချက်တွင်လုံးလုံးနှစ်မြှုပ်ပါ။ ပန်းရောင်ဆဲလ်များ၏အရည်များသည်ရေလုံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
ကွန်ပြူတာကိုပိတ်လိုက်တိုင်းဖန်ခွက်ထဲကဖန်တွေကိုဖယ်ရှားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေနွေးငွေ့ဒါမှမဟုတ်လေပူစက်တွေကိုပိတ်ပြီးနောက်မှာ။ ငါလိုမင်းနဲ့မတူဘူး
က Igor ဟုသူကပြောသည်
သင်သင်ကြားပေးသောဤနည်းသည် iMac အသစ်တွင်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၂၁.၅″ ဒါမှမဟုတ် ၂၇″ လား။
Alexuco, သင်အဆိုပြုထားသောဖြေရှင်းချက်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံပြီးလုပ်ဆောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာ Apple ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၂၇ လက်မအရွယ် iMac Core i7 ကိုအားသွင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့၊ နှစ်နှစ်ကျော်သက်တမ်းတိုးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့်အာမခံချက်ကိုခံလိုက်ရပြီ။
မော်နီတာ၏ဘယ်ဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်ညာရှိအစက်အပြောက်များ (ပျံ့နေသည့်အရိပ်များ) သည်၎င်းတို့မည်မျှကြာမြင့်မည်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ isopropyl အရက်နှင့်ဆေးကြောသောအခါအထည်အနည်းငယ်အရောင်ဖျော့အရောင်ရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ထို့ကြောင့်သူကစိုထိုင်းဆနှင့်ဆေးလိပ်အချို့ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆသည် (ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလိပ်သောက်သူဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာ) Monitor ၏မျက်နှာပြင်မှာအစွန်းအထင်းများကင်းပြီးအကာအကွယ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iMac သည် ၂၀၀၉ ကုန်ခါနီးတွင်ငွေတောင်းခံလွှာဖြစ်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ထို့ကြောင့်ဖန်သား၏တင်ဆက်မှုသည်ရှင်းလင်းဗီဒီယိုတွင်အသုံးပြုထားသောပုံစံနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည်။
ထပ်မံ၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရဲရင့်မှုအနည်းဆုံးရှိသူမည်သူ့ကိုမဆိုကျွန်ုပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအကြံပြုပါသည်။
အကြံကောင်းကောင်း ဒါကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့အသုံးချမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပေမယ့်၊ ဒီလိုပြproblemနာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် ... ငါကြိုးစားမယ်။
ညာဘက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ iMac မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစိုစွတ်တဲ့အစက်အပြောက်တစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါပို့စ်တစ်ပုဒ်နှင့်အတူ post ကိုဖတ်ပါကခြောက်သွေ့တဲ့သူနှင့်အတူအပူပေး, ငါပြုပြီ။ ယခုမူကားငါသည်နောက်တဖန်ကြည့်ရှုလျက်ငါကောင်းစွာပြုတော်မမူ, သို့မဟုတ်သူကပုံစံပြန်လာမလားဆိုတာကိုငါမသိ!
အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်အိမ်ထောင်ဖက်။ စုတ်ယူခြင်းခွက်, တရားစွဲနှင့်နောက်တဖန်အလုပ်လုပ်ရန်။ စကားမစပ်, Apple ကယောက်ျားတွေဟာအတွင်းပိုင်းပြီးအောင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အကုန်မှ ၂၁.၅ imac ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောပျော်ရွှင်သောဖန်ခွက်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားရင်းကျွန်ုပ်တစ် ၀ က်ကွဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုခွဲထုတ်ပြီးသည့်အခါသံလိုက်များကအပြစ်တင်ခဲ့ကြပြီးထောင့်တစ်ထောင့်မှတစ်ခုမှာ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသောကျောက်သလင်း၏ထက် ၀ က် .. အခြားပုံဆောင်ခဲတစ်ခုကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ယူနိုင်သည်ကိုမည်သူမဆိုသိပါသလား။ ဖန်ခွက်မပါဘဲဤကဲ့သို့သောအရာများရရန်ကျွန်ုပ်အားအဘယ်အရာပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဆင်းရဲခြင်းသည်အလုပ်များနေပုံရသည်
နည်းနည်းစျေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် wow ...
သင်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများရှိသည့် Benotac သို့မဟုတ်ပန်းသီးပရီမီယံပြန်လည်ရောင်းချသူကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမှကျွန်တော်ဟာမြူတွေနဲ့စိပ်နေတဲ့အကာအကွယ်ဖန်ခွက်ကိုယူပြီးသေချာစွာဆေးကြောခဲ့သည်။ မင်္ဂလာရှိသောအစွန်းအထင်းများပြန်လာပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ ဖန်သားပြင်တွင်ညာဘက်ခြမ်းတွင်အားနည်းသော်လည်းမြင်သာသောအစွန်းအထင်းများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရန်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ယခုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သောအခါ, ဒီအစက်အပြောက်အလွန်မမြင်ရတဲ့နှင့်မော်နီတာပူနွေးလာသောအခါတိုးပွားလာကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီဟာကစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုဆိုးရွားလာမည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အင်အားသုံးဆဲဖြစ်သောအာမခံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါမည်။
ကျနော့်သီအိုရီကဒီ iMacs ဟာအပူလွန်ကဲတာ၊ သူတို့လိုသင့်သလိုထိထိရောက်ရောက်မပျောက်သွားအောင်လို့ပါ။ thunderbolt port များရှိနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များသည်ဤရှုထောင့်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည် (ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ သို့သော်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်မသိပါ) ။
ကျွန်မရဲ့အလေ့အကျင့်ကစက်ကိုတစ်ရက် ၂၄ နာရီမှာမသုံးတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုးတွေထားတာဖြစ်တယ်။ ငါထင်သည်ဒီအထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာများအဘို့အကောင်းမဟုတ်, ဒါကြောင့်ငါကဆန့်ကျင်အကြံပြုသည်။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ဥပမာအားဖြင့် (ဖြစ်နိုင်သမျှအပူများစွာထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့်) ရုပ်ရှင်ရုံ display သို့မဟုတ်မိုဘိုမော်နီတာနှင့် Macbook pro ကို ၀ ယ်ခြင်းက ပို၍ လုံခြုံသည်။
Monitor ကိုယ်တိုင်စွန်းထင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးအမိုးအတွက်အပြင်ဘက်ဖန်ခွက်ကိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်သည်။ သငျသညျတခါစွန်းတယ်ဆိုရင်, သင်ကထပ်မံလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားနီးပါးနိုင်ပါတယ်။
ငါစဉ်းစားမိသည့်နောက်ထပ်အကြံတစ်ခုတစ်ခုမှာလေ ၀ င်လေအားအတွင်းသို့ ဦး တည်။ အနည်းငယ်ကိုဖိအားပေးရန်၊ အသေးစားပန်ကာ (ဥပမာအချို့သောဗီဒီယိုကတ်ပြားများသို့မဟုတ်ပရိုဆက်ဆာများကဲ့သို့) ကိုမော်နီတာအခြေစိုက်စခန်း၏အောက်ပိုင်းနေရာများတွင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းလေဝင်လေထွက်စနစ်၏လိုငွေပြမှုအလုပ်။ အဲ့ဒီပရိသတ်တွေရရင်ငါလုပ်မယ်
လေထုအခြေအနေများကို "ဖြေရှင်းပြီး" ကြသည်မဟုတ်လျှင်မြူအစွန်းအထင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
၎င်းသည်လုံးဝမှန်ကန်သည် - အကြောင်းရင်းများမပြောင်းပါက၊ သို့သော်တူညီသောပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားစက်များနှင့်မော်နီတာများကိုချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အကုန်မှ ၂၇″ iMac တွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပွားခဲ့သည့်မြူများ၏အဆင်မပြေမှုမရှိဘဲဤ iMac ၏ဒီဇိုင်းသည်အေးခဲနေသောသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအခြားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအားနည်းချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုသံသယရှိခြင်းသည်တရားဝင်သည်။ ဤအယူနစ်၏သိသာထင်ရှားသောအရေအတွက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြနာ။ ငါထင်တာကတော့သူတို့အားလုံးအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက Apple ကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်စေမှာပါ။ ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် iMacs အသစ်မှာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှုလုံးဝပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့ရာတွင်၊ သမိုင်းအစဉ်အဆက်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်လျှင်၎င်းကိုငါသေချာစွာကြည့်မည်။ ထို့အပြင် Windows PC များနှင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမသုံးပါက၎င်းကိုအသုံးမပြုလျှင်၎င်းကို ဆက်လက်၍ မထားရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ငါမကြာသေးမီကဝယ်ယူခဲ့တဲ့ ၁၅″ Macbook pro ကိုတောင်စောင့်ကြည့်မည်။ Mini နှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်ယေဘူယျမော်နီတာကို အသုံးပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့်တူညီသော၊ (ယခုငါ iMac နှင့်အတူလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း) အသံနှင့်ဗီဒီယိုဆာဗာအဖြစ်တစ်နေ့လျှင်နာရီများစွာအသုံးပြုသည်။
ပြPROနာကဒီစိုစွတ်မှုပါ။ ဒီရေစုပ်စက်ကိုသုတ်ခြင်းနှင့်လက်ရှိတည်ရှိနေသောထောင့်တစ်ချက်။ ငါဖန်ထည်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ စက်ရုံမှလာတဲ့မျက်နှာပြင်မှာစုပ်ယူမှုမှ လွဲ၍ မည်သည့်အရာကမှအလုပ်မလုပ်ဘူး ငါ IDEA ရှိသည်အများကြီးကုန်ကျမ။ SILICA GEL ၏ထိပ်တန်းအိတ်များကိုသာကြည့်ပါက၎င်းသည်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူရန်အနည်းငယ်အထောက်အကူပြုသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေသည်။
ဟိုဆေး L Mainieri က F ဟုသူကပြောသည်
၂၇ လက်မအရွယ် iMac ကျွန်ုပ်၏အိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက် (ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကိုပေးသကဲ့သို့) ခဏအကြာတွင်မှန်ကန်တဲ့အစွန်းရှိအစွန်းအထင်းများသည်သူတို့ဘာသာပျောက်သွားသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်အားမြဲသောအစွန်းအထင်းများသည်ဖန်သားပြင်၏“ သံလိုက်ခြင်း” ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားစေသည်၊ ယခင်ပတ်ဝန်းကျင်၌အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်၊ သို့သော်အဓိကအားဖြင့်အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံစပီကာအနည်းငယ်သာစတီရီယိုဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ ကျွန်တော့်ဇနီးက iMac ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာအဲ့တာတွေအားလုံးမရှိခဲ့ပါဘူး။
iMac အသစ်သည်ယခင်နှင့်တူညီပြီး ၆ လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်အစွန်းအထင်းများသည့်ပြproblemsနာများမရှိသေးပါ။ ကက်သရင်းမော်နီတာများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များကဲ့သို့သောထိခိုက်နစ်နာမှုရှိသော iMac သည်ထိုကဲ့သို့သောဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဤကဲ့သို့သောစနစ်ရှိလျှင်ထိခိုက်သော iMac တွင် degaussing degaussing စနစ်ရှိသည်။
အကယ်၍ အစိုဓာတ်သည်အမှန်တကယ်မော်နီတာသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့လျှင်၊ ၎င်းကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်စိုစွတ်သောအ ၀ တ်အစားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်အန္တရာယ်အတွက်ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုစဉ်းစားရန်အကြံပြုသည်။ ၁) အချို့သောအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများအစိုဓာတ်ဖြူမှုတ်ဆေးများရှိသည်။ သင်သည် screen ၏အစွန်း၏သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုအနည်းငယ် အသုံးချ၍ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြန်မဖွင့်မီနာရီအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်ရလဒ်များကိုကြည့်နိုင်သည်။ ၂) ပို၍ ရှုပ်ထွေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပူကိုဆံပင်အခြောက်ခံစက်ဖြင့်ပြင်းထန်စွာအသုံးချခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ရှိအပူပေးစက်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည့် dehumidifier တစ်ခုတွင်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။
လေထုအခြေအနေများမပြောင်းလဲသရွေ့ထိုပြproblemနာသည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုရေးသားခဲ့သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကမှန်ကန်သည်။ ငါသည်လည်း ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်နီးကပ်သည့်သံလိုက်ကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအားလုံးကိုပေါင်းထည့်သည်။
Jose L Mainieri F ကိုစာပြန်ပါ
ငါ့မှာအကြမ်းအားဖြင့် iMac ရှိတယ်၊ အဲဒီပြသနာလည်းရှိတယ်၊ နှစ်ခုရှိတယ်၊ တစ်ခုကအပြင်ဘက်ဖန်ခွက်ကိုစိမ့်ဝင်နိုင်ခြင်း (သို့) တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမရှိခြင်း၊ စိုစွတ်သောနေရာများနှင့်အထူးသဖြင့်များသောအားဖြင့် မီးခိုး, မီးခိုးဝင်သောနှင့် / သို့မဟုတ်အစိုဓာတ်ကိုနှင့် dento အားဖြင့်ဖန်အစွန်းအထင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း jaka101 အထက်တွင်ရှင်းပြသကဲ့သို့ဗီဒီယိုပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်ပြrealနာတစ်ခုမှာအရင်းအမြစ်၊ hard disk၊ ပန်ကာမော်တာစသည့်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များမှထုတ်လုပ်သောအပူကြောင့်စိုထိုင်းဆငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အာမခံမရှိလျှင်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အသုံး ၀ င်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်အတော်အတန်ကြီးမားပြီး၊ သည်းခံခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောလက်များအနည်းငယ်ဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမှာကြည့်ပါ http://www.macuarium.com/cms/macu/guias/index.php?option=com_remository&Itemid=169&func=fileinfo&id=418
ဒါဟာပြAppleနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Apple ကပဲ့တင်သံမဖြစ်ချင်ပေမဲ့မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆိုကုန်ကျစရိတ်အတွက်သူတို့ကဖြေရှင်းပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
iMac ၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများမှဖြစ်ပေါ်လာသောအပူမှအစွန်းအထင်းများကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်နှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးသည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဒီစက်ကအာမခံချက်ရှိရင် Apple Technicians တွေဆီကိုကျွန်တော်အပ်နှံမယ်။ အကယ်၍ အာမခံသက်တမ်းကုန်သွားရင်၊ အဲဒီနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ငါစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် hard drive ကို2TB အထိတိုးမြှင့်ခိုင်းပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အကြံဥာဏ်လိုမျိုးပေါ့၊ ဒီလိုမျိုးမင်းလက်ထဲမှာရှိရင်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဆောင်းပါးရေးသူမည်သူမဆိုဒုတိယအပိုင်းကိုကတိပေးခဲ့သည်။ သူသည်အစွန်းအထင်းများပေါ်လာခြင်းကိုမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရသေးပါ။ ၎င်းအပိုင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ iMac အတွင်းပိုင်း။
၎င်းသည်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ထိုစာအုပ်ကိုယူဆောင်လာသင့်သည်။ သူတို့မှာဘယ်လိုမျက်နှာရှိတယ်၊ ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုမပြောပြဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ဟာနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖုန်းဆက်ပြီး“ စားကျက်” အတွက်တောင်းခံနိုင်တယ်
Dimagic ၁ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါအာမခံချက်အဘို့အ appel တောင်းဆိုစဉ်းစားခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ iMac မှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်စိုထိုင်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိ၊ မရှိမသိပါ။ ကျွန်ုပ်ဖွင့်သောအခါဖန်သားပြင်တစ်ခုလုံးသည်အဖြူရောင်သောကုလားကာဖြင့်ပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်သွားပြီးခဏလေးတွင် mouse ကိုနှိပ်ပါ အိပ်ပျော်ရာမှနိုးရန်အတွက်! ဒါက!!, မျက်နှာပြင်သည်ကောင်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နို့ရည်ကုလားကာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့တစ်ယောက်ယောက်ကသိလား။ တစ်ယောက်ယောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလား။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်တာလဲ။
ကောင်းသော Fatima၊ သင့်မှာ iMac ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ။ အကယ်၍ မည်သူကမှသင့်အားအဖြေမပေးလျှင်၊ သင်သည် Apple ကိုတိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက်နိုင်သည်၊ သူတို့ကသင့်အားဘာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနိုင်သည်။ ခင်ဗျားကမကြာခင်မှာဖြေရှင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အားဖြေဆိုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းပြောတဲ့အတိုင်း Apple ကိုငါခေါ်မယ်၊ ကွန်ပြူတာဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ မကြာခင်ပြန်ပြင်တော့မယ်။ မင်္ဂလာပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်တစ်ခုခုသိသောအခါကျွန်ုပ်တို့အား tell ပြောပြပါ
ငါလှည့်ကွက်ကိုကြိုးစားကြည့်လိုက်တာ၊ ကျွန်တော့်မှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကအစက်အပြောက်အချို့ရှိလို့၊ တံဆိပ်တုံးကောင်းကောင်းရှိတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးကား gps စုတ်ယူခြင်းခွက်နဲ့စမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။ မျက်နှာပြင်ရောက်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုသန့်ရှင်းအောင် လုပ်၍ ၎င်းကိုနေရာချသည်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ငါးမိနစ်ကြာတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Yiya rangel ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ MacBook Pro နဲ့ပြသနာရှိတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အဖြူရောင်ကွက်လပ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုငါသိခဲ့တယ်။ ဒီအမှားကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ၊ ကျွန်ုပ်၏ Mac မှာအာမခံချက်မရှိတော့ပါ။
ငါမဖြန်သေးဘူး၊ နေရောင်ခြည်မထိတွေ့ဘူး၊ ဒီအစွန်းအထင်းပေါ်လာအောင်လုပ်မိတဲ့အမှားကိုငါရှာမတွေ့ဘူး။ မင်းရဲ့အာရုံစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းငါ့ကိုငါ့ကိုတစ်ခုခုပြောနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Yiya Rangel သို့ပြန်သွားပါ
ဟယ်လို! ငါ၏အ Imac ၏မျက်နှာပြင်သည်အပေါ်ထောင့်များနှင့်အလယ်ဗဟိုတွင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နေရပြီး၎င်းကိုပိတ်ထားမှသာသိသာသည်။ ဒါကဘာလဲ
သင်အက်ကွဲသည် နှစ်နာရီကြာဖန်သားပြင်ကိုပေးပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူသည်ပန်းကန်များနှင့်ဆေးကြောခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်သည်။ အသက်ရှင်ပါစေ၊
ငါ့မှာ ၂၁.၅″ စားပွဲတင် Mac ရှိတယ်။ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ Finalcut နဲ့ edit လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ Adobe Premiere cs21,5၊ မကြာသေးမီကဖန်သားပြင်တစ်ခါတစ်ရံမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နဲ့၊ ငါတည်းဖြတ်တဲ့ပရိုဂရမ်ရဲ့အင်တာဖေ့စ်ကိုတွေ့တဲ့နောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိတာကိုပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်။
လွန်ခဲ့သောသုံးရက်ကကျွန်ုပ်၏ mac မျက်နှာပြင်ပြတ်တောက်သွားပြီး၊ နောက်ထပ်တစ်ခုက editing program ကိုပြသနေပါသည်။ Mac သည်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ကိုပိတ်လိုက်သောအခါ screen ကိုဖွင့်သောအခါတွင်မျက်လုံးမှိတ်လျက်၊ သာအပိုဆောင်းမျက်နှာပြင်။ အခါအားလျော်စွာ၎င်းကိုဖွင့်သော်လည်း ၄ င်းတွင်ရှိသင့်သည့်တောက်ပမှုနှင့်မတည့်ပါ။ ၎င်းသည်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာမှုရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အတောက်ပသော့ကို နှိပ်၍ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော၊ အနိမ့်အရောင်ကို နှိပ်၍ မျက်နှာပြင်ပိတ်သွားပါသည်။
ဗွီဒီယိုကဒ် (သို့) မျက်နှာပြင်ပျက်သွားတာဘာဖြစ်နိုင်သလဲ။ ငါရောဂါရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကို run ခဲ့ကြပေမယ့်မဆိုပျက်စီးမှုကိုညွှန်ပြမထားဘူး။
Jose Jesus အားပြန်ပြောပါ
ဓာတ်ပုံအချို့ယူရန် IMAC ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက်မြင်ရသောအဖြူရောင်အစက်များကပုံများတွင်မှုန်ဝါးအောင်လုပ်လိုက်သည်။ ငါကပိတ်ထားနှင့်နေရာများပြောင်းလဲသွားနှင့်ဤအခိုးအငွေ့ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါအဲဒါကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ် သို့သော်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ၎င်းကိုအထည်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုနေရာ၌စိုထိုင်းဆရှိသော်လည်း၎င်းအစိတ်အပိုင်းသည်လေအခြောက်ဖြစ်သဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
လူးဝစ် Mantione ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ IMAC ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းအသေးစိတ်အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ ပထမအချက် - CD drive တစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတယ်၊ စီဒီထဲထည့်လိုက်တာနဲ့၎င်းရပ်သွားပြီးဘာမှမထွက်ပေါ်လာဘူး , နှင့်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမကူညီနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကဖြိုဖျက်ဖို့ရှိသည်နှင့်ကွန်ပျူတာ hermet !!!!! နှင့်ထွက်လာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုတိယ: ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများသို့မဟုတ်အနက်ရောင်အစက်အပြောက်များစတင်ပေါ်လာသည်! မျက်နှာပြင်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်အပြင်တစ် ဦး တည်းပျောက်ကွယ်သွားနေသော၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မည်ဟု !!!!!
Luis Mantione အားပြန်ပြောပါ
ဖြေရှင်းချက်အဘို့အ Bravo, သငျသညျအကြှနျုပျကိုကနေအကောင်းတစ် ဦး မကျြနှာကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူဖယ်ရှားပစ်ပါပြီ။
Mail.app အား plugin မသုံးပဲ Hotmail အကောင့်များဖြင့်ပြုပြင်ပါ
MacWorld 2009 တွင် Apple ၏ KeyNote ၏တောက်ပသောဘက်